कर - उद्यमी नेपाल Udhyami Nepal
कर, वित्त, व्यवसाय गाईड
मूल्य अभिवृद्धि करलाई छोटकरीमा मू.अ. कर अर्थात् भ्याट भनिन्छ। यसको दर्ता PAN को दर्ता जस्तै हो। मू.अ. कर दर्ता गर्दा PAN को प्रमाणपत्रमा मू.अ. कर समेत दर्ता भनेर दर्ता मितिसमेत उल्लेख हुन्छ। सबै PAN दर्ता हुने करदाताहरूलाई मू.अ. करमा दर्ता पुरा पढ्नुहोस् “मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर/भ्याट)”